Madaxa Puntland Siciid Cabdullaahi goormuu noqdey madaxii dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxa Puntland Siciid Cabdullaahi goormuu noqdey madaxii dalka
Madaxa Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa intii la doortey kadib waxa markiiba looga yeeray Imaaraadka waxana loo soo dhiibey kiish lacago iyo fariimo badan oo au ku jirto sida la rabo inuu u dhaqmo.
Waxa kadib uu isku shubey Nayroobi halkaas oo uu la kulmey kooxaha kale ee raba inay Somaliya weligeed hoga ku jirto.
Kadib wuxuu ku soo laabtey Garoowe asagoo kalsooni ka haysta Imaaraadka iyo kuwii uu kula kulmey Nayroobi ee Soomaali iyo ajaanib lahaa, wuxuuna sheegay wixii loo soo gudbiyay kadib eedayn uu u jeediyay dawlada.
Muxuu Garoowe ka sheegay:
Wuxuu sheegay inuu diyaariyay shir asagoon la tashan madaxda qaranka ee aanu aqoonsanayn, sidii looga soo qaybgalay xafladiisii caleemo saarka ma tegin Muqdisho. Wuxuu cadeeyay mudada loo cayimay oo ah soonka kahor.
Waxaad is weydiin kartaa goorma ayuu noqdey madaxa dalka, yaase siiyay awood uu ku go,aamiyo shirar awoodaas leeg.
Ujeedadu maxay tahay:
Wuxuu qabaa kalsooni buuxda oo weliba ka haystaa Imaaraadka iyo kooxihii gaalada ahaa ee uu kula kulmey Nayroobi. Ujeedada ugu weyna waa in dawladu tiraa maya kadibna yiraa waa sidaan rabney ee gaaladii i soo dirtaay kaalaya yimaada oo na dhexdhexaadiya.
Maxaa la gudboon dawlada dhexe:
Way u jeedaan in cadowgii Somaliyeed is biirsadey ujeedaduna waa in la wiiqo dawladnimada oo la curyaamiyo horumarka laga sameeyay dhinaca dhaqaalaha iyo sitaasada arimaha dibedda xilli curyaamin saaran tagay dalkoo dhan.
Shir hadduu dhacayo waa in kii madaxweynaha ku baaqay la tixgeliyaa kana dhacaa caasimada, dawladuna garwadeen ka noqotaa haddii kale waxa imaanaysa in jufo kasta tiraa anaa shir qabanaya, waxana looga hadlayaa sidan iyo sidan.